Ungakuthola Kanjani Ukubonakala kuzinjini Zokucinga
I-I-site: i-Web Solution ukuphuma nokuphuma ku-inthanethi
Ukubonakala: nangu yena umlingo.
Ukubonakala: wonke umuntu uyayifuna, wonke umuntu uyayifuna, wonke umuntu uyijaha ngezindlela ezahlukahlukene. Futhi akuvamile ukusebenza.
Sonke siyazi ukuthi ukungabonakali ku-inthanethi kufana nokungabi lapho. Kuyinqaba ukuthi sonke sizwe kaninginingi. Uma kungekho okutholayo, awukho. Manje-ke, manje, esiphila kusokwakuyedijithali, le nkulumo ibaluleke kakhulu kunangaphambili. Ku-inthanethi, empeleni, akwanele ukuba khona.
Wonke umuntu angaba ne iwebhusayithi muhle kusuka endaweni yokubuka ubuhle, enemibala emihle, izithombe ezingavamile nokusebenza okuhle. Kepha uma ingatholakali futhi ivakashelwa ngumuntu, kuba sengathi ayitholakali.
Kwiwebhusayithi akudingeki ukuba lapho, kodwa futhi kubalulekile ukuze ukwazi ukubonakala. Kuyadingeka ukwakha Amawebhusayithi yakhelwe ukutholakala ngabasebenzisi abasebenzisa i-surf. Futhi eziphendula izidingo zalabo abafuna okuqukethwe kwabo.
Amakhasi okuqala we -Google: lapho izinkulungwane zabasebenzisi zizokuthola nsuku zonke
Ungaba kanjani kuyabonakala kuwebhu ngaphandle kokukhokha amanani amakhulu okuxhaswa? Elula. Kufanele sigxile Isimo se-organic, lokho kusethwa kwamazinga nezindlela zokufinyeleleka kwe iwebhusayithi okumvumela ukuthi azibeke ku amakhasi okuqala ka Injini yokusesha.
Le mithetho yaziwa ngesifinyezo SEO futhi, uma uhlonipha ngokucophelela njengoba nje senza, bazokuqinisekisa ukuthi uzibeka kumakhasi okuqala we -Google. Right lapho izinkulungwane zabasebenzisi zizokubona nsuku zonke.
Ubukhulu obuvumelana nokuguquguquka kwesithombe nokusebenziseka kuwo wonke amadivayisi kagesi
Il iwebhusayithi okwenziwe nguTrovaweb kuqhayisa ngesivumelwano Isabele, ubuchwepheshe obuklanyelwe futhi ofunda nabo ngokukhethekile ukukwazi ukuzivumelanisa nabo bonke amadivaysi kagesi lapho indawo ikhonjiswa khona. Ubuchwepheshe Iselula Ephendulayo wenza isiqiniseko sokuthi iwebhusayithi ingasetshenziswa ngokulinganayo ngempumelelo futhi kusuka ideskithophu che da ephathekayo. Ngalobu buchwepheshe, isayithi lihlukile futhi linehlukile isizinda, kepha ngenxa yamasu athile wokuhlela, akhonjiswa ngezindlela ezihlukile ngokusho kwe display kulayishwe kuyo.
Izinqubomgomo zokuphepha eziqinisekiswe yiGoogle zokuhambisa idatha ngokuphephile
Kwakho Iwebhusayithi eyenziwe yithi izoba nezici ezithuthukile futhi i amazinga okuphepha aphezulu kakhulu.
Izofakelwa Isitifiketi se-SSLit umthetho wokuphepha yakhelwe ukuvumela amasayithi ukuthi adlulise imininingwane nedatha ngendlela evikelwe.
Kwakho iwebhusayithi futhi uzoba namathuluzi asebenza kahle kakhulu Ukuxhumana kwedijithali:
- i-imeyili ngekheli elenzelwe umuntu uqobo;
- Isipele nsuku zonke ukuvikela konke okuqukethwe;
- Ukuphepha okuqinisekisiwe emizamweni yokuphazamisa nokuhlasela kwegciwane.
I-site yi-webhusayithi enikeza ibhizinisi lakho impilo entsha
le abasebenzisi bewebhu benza amakhulu ezinkulungwane zokusesha nsuku zonke ukuthola izimpendulo zemibuzo yabo nokuqukethwe okuhlangabezana nezidingo zabo. Ukuze wenze lokhu, bafaka umbuzo kubonakaliswa ngu igama eliyisihluthulelo. Kususelwa kulawo magama angukhiye i- Injini Yokucinga ngobuhle, -Google, ihlela imiphumela yamakhasi elibonisa abasebenzisi abasebenzisayo. Futhi kusisekelo samagama angukhiye lapho okuqukethwe kufanele kwakhiwe khona ukuze kuvimbele ukusesha kwabasebenzisi futhi kukulethele okwakho iwebhusayithi.
I-I-site yindawo yokubukisa evuselela ibhizinisi lakho sibonga ngokubonakala okungakaze kubonwe ngaphambili
Nakhu iTrovaWeb ikunikeza khona nge-I-Site Solution: Amagama angukhiye kanye nesifundo sokubekwa kwamagama angukhiye asesha kakhulu abasebenzisi be-inthanethi
Njalo iwebhusayithi è multimedia, wafunda futhi waklanyelwa ngendlela yokuheha izivakashi futhi uziguqulele koxhumana nabo kanye namakhasimende angahle abe khona. Ngaphezu kwalokho, ijabulela izinzuzo ezikhethekile njenge Isizinda esizimele nesenziwe ngeziqu.
Kwakho Iwebhusayithi izothuthukiswa futhi inakekelwe kuzo zonke izindlela zokubuka, kuzoba mnandi ukuvakashelwa futhi kube lula kakhulu ukuhamba kuyo. Kepha ngaphezu kwakho konke, kuzokwakhiwa ukuthi kutholakale ngabasebenzisi.
Isayithi lethu liyazi ukuheha izinjini zokucinga
Lapho senza okwakho Iwebhusayithi yesayithi, sinqanda ukusesha kwe abasebenzisi online bese uwaguqula abe amagama abalulekile. Labo igama eliyisihluthulelo esiyokubeka eyakho Iwebhusayithi, eyakhelwe kangcono ukutshela wena nebhizinisi lakho. The iwebhusayithi izodonsela ukunaka kwezinjini zokucinga nabo bonke labo basebenzisi ababefuna wena. Sizoqinisekisa ukuthi bayakuthola.